Gen 11 | Shona | STEP | Nyika yose yakanga ino rurimi rumwe nokutaura kumwe.
1 Nyika yose yakanga ino rurimi rumwe nokutaura kumwe. 2Zvino vakati vachitamira mabvazuva, vakawana bani munyika yeShinari, vakagarako. 3Vakataurirana, vachiti, "Uyai, ngatiite zvidhina, tizvipise kwazvo." Zvidhina zvakava mabwe avo, nebitumini rakava dope ravo. 4Vakati, "Uyai, ngatizviva­kire guta, norusvingo, runomusoro uno­svikira kudenga; tizvimutsire mukuru­mbira, kuti tirege kupararira panyika yose."
5Ipapo Jehovha wakaburuka kuzota­rira guta norusvingo, rwakanga ruchiva­kwa navanakomana vavanhu. 6Jehovha akati, "Tarirai, vanhu ava ndivamwe, vanorurimi rumwe vose; zvino ndizvo zvavanotanga kuita; zvino hakuchina chi­nhu chavangada kuita chavangadziviswa. 7Hendei, tiburuke, tinopesanisa rurimi rwavo ipapo, kuti varege kunzwana kana votaurirana." 8Jehovha akavaparadzira ipapo, vakapararira panyika yose, vaka­rega kuvaka guta ravo. 9Naizvozvo va­karitumidza Bhabheri, nokuti ipapo Jeho­vha wakapesanisa rurimi rwenyika yose; Jehovha akavaparadzira ipapo, vakaenda kunyika dzose.
10Ndiwo marudzi aShemu. Shemu wakanga ana makore ane zana, akabereka Aripakishadhi, mvura zhinji yapfuura makore maviri; 11wakati abereka Aripa­kishadhi, Shemu akagara makore ana mazana mashanu; akabereka vanako­mana navanasikana.
12Aripakishadhi wakagara makore ana makumi matatu namashanu, akabe­reka Shera; 13wakati abereka Shera, Ari­pakishadhi akagara makore ana mazana mana namatatu, akabereka vanakomana navanasikana.
14Shera wakagara makore ana ma­kumi matatu, akabereka Ebheru. 15Wa­kati abereka Ebheru, Shera akagara ma­kore ana mazana mana namatatu; akabereka vanakomana navanasikana.
16Ebheru wakagara makore ana ma­kumi matatu namana, akabereka Peregi, 17wakati abereka Peregi, Ebheru akagara makore ana mazana mana namakumi matatu, akabereka vanakomana navanasi­kana.
18Peregi wakagara makore ana ma­kumi matatu, akabereka Rehu; 19wakati abereka Rehu, Peregi akagara makore ana mazana maviri namapfumbamwe, akabereka vanakomana navanasikana.
20Rehu wakagara makore ana ma­kumi matatu namaviri, akabereka Serugu; 21wakati abereka Serugu, Rehu akagara makore ana mazana maviri namanomwe; akabereka vanakomana navanasikana.
22Serugu wakagara makore ana ma­kumi matatu, akabereka Nahori; 23wakati abereka Nahori, Serugu akagara makore ana mazana maviri, akabereka vanako­mana navanasikana.
24Nahori wakagara makore ana ma­kumi maviri namapfumbamwe, akabe­reka Tera; 25Nahori akagara makore ane zana negumi namapfumbamwe, akabe­reka vanakomana navanasikana.
26Tera wakagara makore ana ma­kumi manomwe, akabereka Abhuramu naNahori, naHarani.
27Ndiwo marudzi aTera; Tera waka­bereka Abhuramu, naNahori, naHarani; Harani akabereka Roti; 28Harani akafa, baba vake Tera vachiri vapenyu, panyika yokuberekwa kwake, paUri yavaKara­dhea. 29Abhuramu naNahori vakazviwa­nira vakadzi; zita romukadzi waAbhu­ramu rainzi Sarai; zita romukadzi waNahori rainzi Mirika, mukunda waHa­rani, baba vaMirika, nababa vaIsika. 30Sarai wakanga asingabereki, wakanga asina mwana. 31Zvino Tera wakatora mwanakomana wake Abhuramu, naRoti, mwanakomana waHarani, mwanako­mana womwanakomana wake, naSarai, mukadzi womwanakomana wake Abhu­ramu; vakatama navo vakabva Uri yavaKaradhea, kuti vaende kunyika yeKenani, vakasvika Harani, vakagarapo. 32Mazuva aTera akanga ari makore ana mazana maviri namashanu; Tera akafira Harani.